Zimbabwean Elections | News24
Multimedia > Africa > Zimbabwean Elections
A Zimbabwean MDC member restrains a fellow party member from confronting members of the ruling Zanu-PF party, not seen, as they were allegedly trying to intimidate people attending an election rally by MDC parliament member Trudy Stevenson in Hatcliffe some 20km north of Harare, Zimbabwe. (Karel Prinsloo, AP)
Zimbabwean MDC parliament member Trudy Stevenson campaigns during an election rally in Hatcliffe some 20km north of Harare, Zimbabwe. (Karel Prinsloo, AP)
A Zanu-PF supporter dances with a poster of Zimbabwean President Robert Mugabe, during an election rally in Bindura, 85km north east from the capital, Harare. (Karel Prinsloo, AP)
Zimbabwean MDC leader Morgan Tsvangirai, addresses supporters during an election rally in Buhera, 243km south east of Harare, Zimbabwe. (Themba Hadebe, AP)
Zimbabwean MDC leader Morgan Tsvangirai, right, and his wife Susan, left, attend an election rally in Buhera, Zimbabwe, 243km south east of Harare. (Themba Hadebe, AP)
A Zimbabwean ruling Zanu-PF supporter, runs for cover as MDC supporters, unseen, throw stones during their election rally in Chitungwiza, 35km east of Harare, Zimbabwe. (Themba Hadebe, AP)
An MDC supporter claps his hands during an election rally in Chitungwiza, 35km east of Harare, Zimbabwe. (Themba Hadebe, AP)
Two unidentified election officials put up direction arrows near a polling station in Harare. (AP Photo)
A Zimbabwean MDC supporter dances during an election rally in Chitungwiza, 35km east of Harare, Zimbabwe. (Themba Hadebe, AP)
Supporters of the Zanu-PF march to attend a rally by Zimbabwean President Robert Mugabe during his last election rally in Harare before the start of parliamentary elections. (Karel Prinsloo, AP)
Supporters of the Zanu-PF party hold posters of Zimbabwean President Robert Mugabe during his last election rally in Harare before the start of parliamentary elections. (Karel Prinsloo, AP)
Supporters of Zimbabwean President Robert Mugabe hold up a poster against British Prime Minister Tony Blair behind a police officer during Mugabe's last election rally in Harare before the start of parliamentary elections. (Karel Prinsloo, AP)
Zimbabwean President Robert Mugabe addresses supporters of his Zanu-PF party during his last election rally in Harare before the start of parliamentary elections. (Karel Prinsloo, AP)
Election officials sit on the back of a truck with ballet boxes as they start preparations for the election in Bulawayo, Zimbabwe. (Schalk van Zuydam, AP)
Zimbabwean MDC supporters give the open hand salute to leader Morgan Tsvangirai, unseen, during an election rally in Buhera, 243km south east of Harare, Zimbabwe. (Themba Hadebe, AP)
Children play with water near a Zimbabwean MDC election rally held by MDC parliament member Trudy Stevenson in Hatcliffe. (Karel Prinsloo, AP)
A woman carrying water walks past Zimbabwean MDC election posters during an election rally by MDC parliament member Trudy Stevenson in Hatcliffe 20km north of Harare, Zimbabwe. (Karel Prinsloo, AP)
Zimbabwean MDC supporters during an election rally in Harare, Zimbabwe. (Themba Hadebe, AP)
A white Zimbabwean woman talks on her mobile phone as she lines up to cast her vote in the Avondale suburb of Harare. (Karel Prinsloo, AP)
Zimbabwean's cast their votes in Zimbabwe's parliamentary elections in the suburb of Highfield in Harare. (Karel Prinsloo, AP)
Zimbabwean's line up to vote next to a destroyed corn field in Zimbabwe's parliamentary elections in the suburb of Highfield in Harare. (Karel Prinsloo, AP)
An election official directs Morgan Tsvangirai the leader of the MDC to a polling booth to cast his vote. (Karel Prinsloo, AP)
Zimbabwe President Robert Mugabe casts his vote at a polling station in Harare. (AP)
Zimbabweans queue outside the polling station to cast their vote during the parliamentary elections at Mbare in Harare, Zimbabwe. (Themba Hadebe, AP)
An unidentified woman reacts after casting her vote in parliamentary elections at a polling station in Harare. (AP)
Children who did not want to give their names carry firewood close to the town of Bulawayo, Zimbabwe.(Schalk van Zuydam, AP)
People stand in a queue as they wait to vote in parliamentary elections in the town of Tsholotsho around 125km from Bulawayo, Zimbabwe. (Schalk van Zuydam, AP)
An unidentified woman shows her ballet paper to election officials before voting in the town of Tsholotsho around 125km from Bulawayo, Zimbabwe. (Schalk van Zuydam, AP)
People stand in line as they wait to vote in parliamentary elections in the town of Tsholotsho around 125km from Bulawayo, Zimbabwe. (Schalk van Zuydam, AP)
Ruling Zanu-PF party supporters carry a mock coffin representing the opposition MDC as they wait for election results at Porta farm some 20km south of Harare, Zimbabwe. (Karel Prinsloo, AP)
MDC supporters hold a poster of their leader Morgan Tsvangirai as they wait for election results at Porta farm some 20km south of Harare, Zimbabwe. (Karel Prinsloo, AP)
An unidentified man emerges from a polling station in Seke, 49km east of Harare. (AP)
Zimbabwean election officials empty a ballot box at the end of voting during the Parliamentary Elections at Seek, 49km east of Harare, Zimbabwe. (Themba Hadebe, AP)
Zimbabwean President Robert Mugabe talks to journalists soon after casting his vote at a polling station in Harare. (AP)
A Zimbabwean woman casts her vote in Zimbabwe's parliamentary elections in Highfield, a suburb of the Zimbabwean capital Harare. (Karel Prinsloo, AP)